YoYarLay Online Media - အအိုမြန် အရွယ်ကျမြန်စေသော အကြောင်းများ
အအိုမြန် အရွယ်ကျမြန်စေသော အကြောင်းများ
"ဘုရား ဘုရား၊ ယုရေ... ကြည့်ပါဦး..၊ ငါ့မျက်လုံးနားမှာ အရေးအကြောင်းလေးတွေ ပေါ်စပြုနေပြီ "
" ဟဲ့...သေရေးရှင်ရေးမဟုတ်ပေမယ့်...သေရေး ရှင်ရေးနီးနီး အရေးကြီးတယ်ဟဲ့...ငါ့အသက်က ခုမှ ၂၅ပဲရှိသေးတာ...ဒီလိုအရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးလေ....ပုံမှန်ဆို အသက် ၃၀-၃၅ လောက်မှဖြစ်ရမယ့်ဟာတွေ "
"အသက် ၃၀ကျော်မှ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ? အနေအထိုင် အစားအသောက်မတတ်ရင် အရွယ်မတိုင်ခင် အိုလွယ်တယ်လေ။ မိနန်းရယ်...နင်ဆိုသည်မှာလည်း လှချင်တာပဲရှိတာ...အလှအပ၊ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ ဘာမှ မလေ့လာ မမှတ်သားဘူး"
" ဆိုလိုတာက ငါ အနေအထိုင်အစားအသောက်မတတ်လို့ အချိန်မတိုင်ခင် ဒီအရေးအကြောင်းတွေလာပေါ်နေတာပေါ့? "
"ပြောပါဦး...ငါ ဘာတွေများလုပ်မိလို့လဲ ?"
"ပြောမှာ ပြောမှာ....ပြောစရာတွေမှ တစ်ပုံကြီး...။
တစ်အချက် - အိပ်ရေးဝဝမအိပ်ဘူး။ ညညဆို ဖုန်းပွတ်နေတာ ၁၂နာရီ၊ ၁နာရီ...။ မနက်ကျ အလုပ်စောစောသွားရတော့ နင့်မှာ အိပ်ရေးမဝ။
နှစ်အချက် - ရေမသောက်ဘူး။ တစ်နေ့လုံးနေလို့မှ ရေတစ်ဗူးတောင်ကုန်အောင်မသောက်။
သုံးအချက် -အပြင်စာတွေစားလွန်းတယ်။ နင်စားစားနေတဲ့ ဆိုင်က အစားအသောက်တွေက အချိုမှုန့်တွေ များမှများ၊ အအေးဆိုလည်း သကြားတွေ အချိုတွေများလွန်းတာတွေပဲသောက်။ မိနန်းတို့ Fresh juice သောက်တာ ခပ်ရှားရှားရယ်နော်။
လေးအချက် - နေပူထဲထွက်ရင် Sunscreen ဘယ်တော့မှမလိမ်း...ငါသတိပေးလည်း ပေးပေးပဲ"
" ဟဲ့...ငါက Sunscreen ပဲမလိမ်းတာ...ငါ့အသားအရည်တော့ ငါဂရုစိုက်ပါတယ်။ ငါ့မှန်တင်ခုံလည်း သွားကြည့်လိုက်ဦး... Skin Care တွေအပြည့်ပဲ "
"အေး... အဲဒါက နံပါတ်ငါးအချက်ပဲ...Skin Care တွေ brand ပေါင်းစုံ တစ်ပုံကြီး အထပ်ထပ်သုံးရင်လည်း အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ မယုံရင် စာလေးဘာလေးရှာဖတ်ကြည့်။"တန်ဆေး လွန်ဘေး "တဲ့ ကြားဖူးတယ်မလား "
"အေးပါဟယ်...ဟုတ်ပါပြီ..ဒါပဲလား... ကုန်ပြီလား ပြောစရာ"
"နိုးပါ....မကုန်သေးဘူး။ နံပါတ်ခြောက်အချက်ကတော့...နင် ဆိုရှယ်ကျချင်...ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ပုံတင် ၊Check-In တင်ချင်တာနဲ့တင်ပဲ ညဘက်တွေ မကြာမကြာ...Bar တွေသွား... ဘီယာတွေ အရက်တွေသောက်....အဲဒီအရည်တွေကလည်း နင့်ကိုဒုက္ခပေးတာ...နင်လုပ်သမျှတွေက အရေးအကြောင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်နေတာတွေပဲ..."
"မိယုမ...နင်ငါ့ကို ဘယ်အချိန်တည်းက ဖဲ့ချင်နေလည်းမသိ...။ နင်ပြောကာမှ ငါ့မှာရစရာတစ်ကွက်မှ မရှိတော့ဘူး။"
"အေး အေး...အဲဒီလိုစိတ်ဆိုးတာက ခုနှစ်ချက်မြောက်အကြောင်းရင်းပဲ။ စိတ်ဆိုး ဒေသထွက် စိတ်ဖိစီးမှုများ...အဲဒီအကျင့်တွေကို မြန်မြန်ဖျောက်နိုင်ရင်ဖျောက် ၊မဖျောက်နိုင်ရင် နင်တော့ မကြာခင် အိုဇနာကျတော့မှာ...အဟေးဟေး "
"မိယု!!!!! စိတ်ပုတ်မကြီး...သူများစိတ်ညစ်နေတာကို။ နင်လည်းပါတယ် အမှန်က...နင်ဒီလောက်သိနေတတ်နေတာ အစတည်းက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းလေးကို သတိပေးပါ့လား...ဟွန်း "
"အံမယ်...ကျွန်မ ရှင့်ကို ဒါတွေသတိပေးနေတာ အခါတစ်ရာမကရှိနေပါပြီနော်။ သူ့ဟာသူ အရေးမလုပ်ဘဲ...ခု တကယ်ဖြစ်လာမှ ကျုပ်ပြောတာ နားဝင်ပြီး "
"ဟီး....မသိဘူးလေဟယ်...အရင်က မဖြစ်သေးတော့ ငါက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ဖြစ်နေတာပါ "
" ဟွန်း "
"နင့်မှာတော့ ဒီလောက်ပဲ။ ကျန်တဲ့....ဒီလိုမျိုး အရွယ်မတိုင်ခင်စောစောစီးစီး အိုမင်းရင့်ရော်ရတဲ့ တစ်ချက်ကတော့...ဆေးလိပ်သောက်တာ..ဒါမှမဟုတ်...သူများသောက်တဲ့ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူရတာ...ကံကောင်းတာက ငါတို့ကမိန်းကလေးအဆောင်ဆိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူမရှိ...ရုံးမှာလည်း ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူမရှိတော့..တော်သေးတာပေါ့ "
" ကျေးကျေးပါ သယ်ရင်းလေးရေ.....ဒါနဲ့ ဒါတွေပျောက်ပါတော့မလားမသိ...."
"ပျောက်ပါတယ်အေ.....ခုနက ငါပြောထားတဲ့ နင့်ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖျောက်ဖို့ပြင်....အသားအရည်ကိုစနစ်တကျဂရုစိုက်...ခုမှငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်...ပြန်ကောင်းမှာ မပူနဲ့.....ဒါနဲ့မှမရရင်လည်း စိတ်မပူနဲ့.....ခေတ်မှီနည်းတွေ အလှအပဆိုင်ရာဆေးခန်းတွေမှ တစ်ပုံကြီး...ဟုတ်ပလား"
မေ@ဆေး ၂ (ရိုးရာလေး)